Gbasara Anyị - Beijing Duomilai Garments & Attire Co., Ltd.
CHECKEDOUT ụlọ isi nri na-eme ka ndị ọzọ nwee ụlọ ọrụ na-emepụta otu akwa pụrụ iche.
E guzobere CHECKEDOUT na 1995 na isi ụlọ ọrụ dị na Beijing, China.
Ngwaahịa ebubatala ihe karịrị mba 50 nke gụnyere ihe karịrị ụlọ ahịa 80 na ndị otu 100 na-ere ahịa. Oke ahịa a bụ NO.1 na China, na-ere ahịa kwa afọ nke ihe karịrị nde 7 nde. Ihe karịrị ụlọ obibi 100 na ndị nkesa 200.
CHECKEDOUT nwere ngalaba mmepụta 3 dị na Yanjiao, Qingxian na Yuncheng. Ihe ruru ndị ọrụ 500 nke na-agba mbọ hụ na anyị nwere ike mezuo ihe ndị ahịa dị iche iche chọrọ.
Ngwa ahịa ndị a na-enyocha dị iche iche dị na ya na-ekpuchi mkpuchi isi onye isi, akpa nri, uwe ogologo ọkpa, okpu, akpa mma wdg. Ngwaahịa niile dabara adaba maka ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, ụlọ mmanya, ụlọ ahịa, ebe a na-eme achịcha wdg.
CHECKEDOUT bụ onye na-ahụ maka Chef Uniform nke Mgbakọ Mba Worldwa; US White House họpụtara onye otu ụdị nri nri; CCTV-2 Chef King asọmpi ka enyere ndị ahia ihe wdg.
Isoro YKK, TORAY na ụlọ ọrụ Fortune 500 ndị ọzọ mepụta usoro pụrụ iche nke na-asacha na njirimara, enweghị nkụda mmụọ, akwa mma, enweghị carcinogens, na ndụ ọrụ ogologo. Ọ na-ebelata oke ikuku carbon dioxide maka ọha mmadụ ma na-eme nnukwu onyinye maka nchekwa nri yana ahụike ọha kwa afọ.
Otu R&D otu aka nke nwere 20persons na-ejide ozi kachasị dị mkpa banyere ejiji ma mepụta ngwaahịa na uru aestetiiki na arụmọrụ.
CHECKEDOUT otu na-akwado ndị ọrụ raara onwe ha nye, ndị ọkachamara na ndị aka ha kwere nkwa na ha ga -eme ka CHIKEDOUT uwe na-eguzogide akwa esiri bụrụ ụdị ama ama ụwa.